Idizayini Yokupakisha Ubhiya We-Bavarian
Sonto 2 Januwari 2022
Idizayini Yokupakisha Ubhiya We-Bavarian Ezikhathini zangeNkathi Ephakathi, izindawo zokuphisa utshwala zasendaweni zivumela iminyaka yazo yobhiya ibe ngaphezulu kwama-cellars aneminyaka engaphezu kwama-600 ubudala engaphansi kwesigodlo saseNuremberg. Ukuhlonipha lo mlando, ukufakwa kwe- "AEcht Nuernberger Kellerbier" kubukeka kahle emuva esikhathini. Ilebuli kabhiya ikhombisa umdwebo wesandla wenqaba ehlezi emadwaleni kanye nomgqomo wokhuni osegumbini elingaphansi komhlaba, owenziwe amafonti wohlobo lwesivuno. Ilebuli yokufaka uphawu lophawu lwenkampani "iSt. Mauritius" kanye nokhokho womqhele wethusi kudlulisa ubuciko nokwethembana.
Mgqibelo 1 Januwari 2022
Indawo Yokuthengisa Idizayini ihlanganisa abantu basenyakatho-mpumalanga nobumnene nomusa waseNingizimu ukuze impilo igcwele ngokubandakanya. Idizayini ehlakaniphile nokuhlelwa okuhlanganisiwe kunweba ukwakhiwa kwangaphakathi. Umklami usebenzisa amakhono wokuklama alula nangamazwe omhlaba anezinto ezihlanzekile nezinto ezibonakalayo, ezenza isikhala sibe semvelo, siphumule futhi sihluke. Idizayini iyisikhungo sokuthengisa esinamamitha-skwele angama-600, ihlose ukuklama isikhungo sesimanje sokuthengisa ubizo, okwenza inhliziyo yomhlali ithule futhi ilahle umsindo ongaphandle. Gcina kancane futhi ujabulele impilo yobuhle.
Indawo Yokuthengisa Lo mklamo uhlose ukuhlola ukuthi ungaletha kanjani isipiliyoni esijabulisayo sempilo enhle yedolobha, eqhuba abantu baphishekele impilo enhle futhi iholele abantu ukuthi baye lapho kuhlala khona izinkondlo ezisempumalanga. Umklami usebenzisa ikhono lesimanje futhi elilula lokuklama ngezinto zemvelo nezisobala. Ukugxila emoyeni futhi ungayinaki ifomu, umklamo uhlanganisa izakhi ze-landscape Zen nezamasiko wetiye, imizwa yokuzijabulisa yabadobi, isambulela sephepha likawoyela. Ngokuphathwa kwemininingwane, ilinganisa umsebenzi nobuhle futhi yenza ophilayo abe ngobuciko.
Lwesine 30 Disemba 2021
I-Villa Idizayini isebenzisa amasu wokuklama wokulinganisa okusemthethweni njengama-aixs ukudlulisa umqondo wobuciko wasempumalanga. Yamukela izakhi zoqalo, i-orchid, iplamu nembali ne-landscape. Isikrini esilula sakhiwa ukunwetshwa kohlobo lwe-bamboo ngokudonsa ifomu likakhonkolo bese lima lapho kufanele lime khona. Igumbi lokuhlala nezakhiwo zokudlela eziphezulu naphansi zichaza umkhawulo wesikhala futhi ziqukethe indawo ethembela empumalanga eyingcosana kanye ne-patchwork. Cishe isihloko sokuphila ngokulula nokuhamba kancane, imigqa ehambayo icacile, kuyindlela entsha yokuzama indawo yokuhlala yabantu.
Brand Salon Branding
Brand Salon Branding Inhloso yenqubo yokubeka uphawu ukubeka uphawu esigabeni esiphakeme ngokubheka nokuzizwa kokuzivumelanisa nezimo zomhlaba wonke ekunakekelweni kwezimonyo nokunakekelwa kwesikhumba. Inhle ngaphakathi nangaphandle kwayo, inika amakhasimende ithuba lokubalekela ngokunakekela ukushiya kuvuselelwe. Ukudlulisa ngempumelelo isipiliyoni kubathengi kufakwe enqubeni yokuklama. Ngakho-ke, i-Alharir Salon yathuthukiswa, izwakalisa ubufazi, izinto ezibukwayo, imibala egqamile nemidwebo ngokunakwa imininingwane emihle yokwengeza ukuzethemba nokunethezeka okwengeziwe.
Lwesibili 28 Disemba 2021
Bubble Forest Ukubazi Komphakathi Mgqibelo 25 Juni
The Cutting Edge Ukusabalalisa Ekhemisi Lwesihlanu 24 Juni
Cloud of Luster Indawo Yomshado Lwesine 23 Juni
Idizayini Yokupakisha Ubhiya We-Bavarian Indawo Yokuthengisa Indawo Yokuthengisa I-Villa Brand Salon Branding Smart Ekhishini Isigayo